Ngathi | Imbuyekezo Shaoxing Huawo Auto Parts Co., Ltd.
Imbuyekezo Shaoxing Huawo Auto Parts Co., Ltd.
Sili shishini elinobuchule eligxile ekwenzeni, ukuyila kunye nokuphuhlisa izixhobo zemoto. Kwi2004, U-Huawo uqalise ukuveliswa kwezinto ze-TPO / TPE, iimethi zemoto, iitranki, iikhaphethi kunye ne-Car Sound Deadening Mat, ngenxa yokuba sinemveliso yethu ekrwada kunye nophuhliso lwemveliso.
Imethi yemoto ye-TPE / TPR ngowona mgangatho uphezulu kwintengiso, i-Eco-friendly, i-Anti-slip, kwaye ibonelela ngayo yonke ukhuseleko lwemozulu, khusela imoto yakho ekungcoleni, eludakeni, kwityiwa, kwimvula nakwikhephu. Kwaye i-100% ilungile ngokwesiko kwimoto yakho, yenza ubomi bulula kwaye bucoceke.
Neminyaka eliqela yophuhliso ngesantya esiphezulu, siye wakha iimveliso zayo kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho ogqibeleleyo kunye elebhu esemgangathweni. Ngoku sibonelela ngeemethi zemoto kunye neMoto yokuLungisa iMoto kwiVolkswagen kunye neToyota.
Njengoko ishishini lethu kunye nabaxumi bekhulile, sinomdla wethu wokuvelisa kunye nokubonelela ngezinto eziphezulu zemoto kwintengiso.
Sinomatshini ukusuka kwimathiriyeli ukuya kwimveliso yokugqibela. Sinikezela ngeenkonzo zobungcali kunye nexesha elifanelekileyo lokuhambisa kubo bonke abathengi.
Siza kuba nawe ukuseka ubudlelwane bexesha elide bokubambisana.